Decolonization မပြီးဆုံးသေးပါ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ဖိအားပေးရန်လိုအပ်နေပြီ။ - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign
Decolonization မပြီးဆုံးသေးပါ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ဖိအားပေးရန်လိုအပ်နေပြီ။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2015 အင်္ဂါရပ်များ 1
ဒေါက်တာ Hakim Mohandas Amani Williams
(အထူးဆောင်းပါး - ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၈ ရက်)
၁၄၉၈ ခုနှစ်ခန့်တွင်ကိုလံဘတ်စ်သည်ကာရစ်ဘီယံသို့တတိယအကြိမ်ခရီးစဉ်၌အနည်းငယ်ကွဲပြားသောလမ်းကြောင်းဖြင့်သွားခဲ့သည်။ သူ၏တောင်ဘက်ပိုင်းအလှည့်အပြောင်းကသူ့ကိုယခုဗင်နီဇွဲလားနှင့်နီးကပ်စေသည်။ သူသည်ကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုမြင်သောအခါတောင်ထိပ်သုံးခုနှင့်သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုသတိရလာသည်။ ထိုဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သောဤမြေကိုထို့ကြောင့် La Isla de la Trinidad ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၈၀၂ ခုနှစ်တွင်စပိန်သည်ထရီနီဒတ်ကိုဗြိတိသျှသို့တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဆိုသော်လည်းထိုအမည်မှာစွဲကပ်နေသည်။ မြို့တော်ကိုပင်စပိန်ဆိပ်ကမ်းဟုခေါ်သည်။ ခေတ်ပြိုင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနေရာဖယ်ထားခြင်း၊ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုရှာဖွေခြင်းများ
မြို့တော်ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်နေရတဲ့တောင်ကုန်းအချို့ပေါ်မှာထိုင်ပြီးကျွန်တော့်မွေးရပ်မြေပါ။ ၎င်းသည် Laventille ဟုခေါ်သောနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ဆင်းရဲပြီးကြီးပြင်းလာပြီး Laventille တွင်နေထိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ငါတစ်နိုင်ငံလုံးဆင်းရဲမွဲတေခဲ့သည်ထင်။ Trinbagonians အားလုံးမှာအိမ်သာတွေရှိတယ်၊ အိပ်ယာတစ်လုံးတည်းမှာပဲအိပ်ခဲ့ရတယ်။ Trinbagonian ကလေးတွေအားလုံးညဘက်မှာသေနတ်သံတွေသံကိုကြောက်နေတယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်နိုင်ငံသား / အမျိုးသားအားလုံးသည်သူတို့၏အဖွားပင်စင်လစာမှကင်းလွတ်ကြသည်ဟုထင်ခဲ့သည် ကျွန်တော့်ရဲ့အနေအထားကတိုင်းပြည်အပေါ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်ရှိတယ်။ ငါတစ်ခုလုံးကိုမမြင်နိုင်ဘူး ကိုလိုနီခေတ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုကျွန်တော်စတက်မှမှသာ၊ ကျွန်ုပ်သည်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူမျှမတူတာကိုသဘောပေါက်နားလည်လာသည်။ ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လေ့လာရန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာမှသာတိုင်းပြည်ထွက်ခွာမှသာ, ဒီသဘောပေါက်နားလည်သဘောပေါက်။ အဲဒီအကွာအဝေးကကျွန်တော့်ကိုမျက်လုံးတစ်ကြည့်မြင်လိုက်ပြီးအစက်တွေကစတင်ချိတ်ဆက်လာတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ Hakims တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းများမှာကြီးပြင်းလာတယ်၊ အဲ့ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုပုံဖော်တဲ့အင်အားစုတွေဟာဒီအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ထူးခြားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါနားလည်ခဲ့တယ်။ အမှန်မှာထိုအင်အားစုအချို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခဲ့သောသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ဖြစ်သောဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုခွဲဝေယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုနိုင်ငံသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလန်မှလွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ် ၅၂ နှစ်တာကာလအတွင်း TT သည် OECD ၀ င်ငွေမြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ သို့တိုင်၎င်းသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း (၂၀%) ရှိသည်။ TT သည်တောင်အမေရိကနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိနေခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ sector တိုးတက်နေခြင်းကြောင့် TT သည်တောင်အမေရိကရှိထောက်ပံ့ရေးအခြေစိုက်စခန်းမှမြောက်အမေရိကရှိဝယ်လိုအားစျေးများသို့ဖြတ်သန်းသွားသောမူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သွယ်ရေးစင်္ကြံတစ်လျှောက်တွင်အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာဖြစ်လာသည်။ လက်နက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြန့်ပွားမှုသည်အကျိုးအမြတ်များသောနိုင်ငံတကာမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည်။ TT တွင်ဂိုဏ်းအရေအတွက်တိုးများလာပြီးစီးပွားရေးအရစိတ်ဓာတ်ကျနေသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကအကြမ်းဖက်မှုများတိုးများလာခြင်း၏အဓိကရုဏ်းကိုခံနေကြရသည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီတီတီသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသတ်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီနောက်ခံမှာ TT မှာကျောင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုငါလေ့လာသည်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းများသည်အကြမ်းဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကိုယ်ခံစွမ်းအားနေရာများမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပညာရေးနိမ့်ကျမှုတို့ကြောင့်လူသိများသောမြို့တော်ရှိအလယ်တန်းကျောင်းတစ်ခုတွင်နှစ်ရှည်လများအရည်အသွေးရှိသောသုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အချက်အလက်များမှကျွန်ုပ်အတွက်အတည်ပြုပေးခဲ့သည့်အချက်အလက်များမှာကျွန်ုပ်၏ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများမှကျွန်ုပ်၏သံသယများဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုသရုပ်ခွဲကြည့်ခြင်းမှဖုံးကွယ်ထားသည်။ ကျောင်းသားများမှဆရာများအထိကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအထိပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှအရာရှိများသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်အရဖမ်းဆီးမိသည်။ စစ်ကြောမေးမြန်းခြင်းမှလုံးဝချန်လှပ်ထားခြင်းသည်ဤတိုက်ရိုက် / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်စေသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပုံစံများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၏ကျဉ်းမြောင်းသောအတွေးအခေါ်များဖြင့်အသိပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါကြားဝင်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ် 'အကြောင်းတရားများ' 'မဟုတ်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြသည်။ ပါဝင်သူများသည် quidian ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့်ဘဝစီးဆင်းခြင်းများတွင်အရှိန်အဟုန်အမြင့်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပါ။ ကိုလိုနီခေတ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောထရီနီဒက်တွင်တည်ရှိနေသောပညာရေးစနစ်ကိုပြanyoneနာဖြစ်စေသောမည်သူမဆို (ဆိုလိုသည်မှာလွတ်လပ်ရေးမတိုင်မီကဆောက်လုပ်ခဲ့သောထိပ်တန်းပညာရပ်ဆိုင်ရာကျောင်းများနှင့်အမျိုးသားစာမေးပွဲတွင်အမြင့်ဆုံးရရှိသောကျောင်းသားများသို့မဟုတ်လူမှုယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ရှိကျောင်းသားများဖြစ်သည်) / ဆက်သွယ်မှုများကိုဤကိုလိုနီကျောင်းများသို့အပ်နှံသည်) လွတ်လပ်ရေးရသည့်ကာလ၌ (အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပညာရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်) စာသင်ကျောင်းမည်မျှချထားသည်ဆိုသည်မှာရုပ်ဝတ္ထုနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းရှိသေနတ်များ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့နေရသောကျောင်းသားများ၊ မည်သည့်စိတ်ဒဏ်ရာကိုမဆိုကုသမှုခံယူရန်အတွက်ကျောင်းများတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအထောက်အပံ့များမရှိခြင်းစသည်တို့ကိုမည်သူမဆိုချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
TT သည်ရာစုနှစ်များစွာကိုလိုနီစနစ်၊ ကျွန်ပြုမှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှကင်းလွတ်ခဲ့သောကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလအသစ်စက်စက်မဟုတ်ပါ။ ကများပြားလှသောသမိုင်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် နှင့် ခေတ်ပြိုင်လွှမ်းမိုးမှု။ သမိုင်းကိုမကြာခဏသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရပြီးခွဲမခံသောခရစ်ယာန်သာသနာပြုများအဖြစ်တင်ဆက်သည်။ သမိုင်းသည်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသော၊ တိကျသော၊ ပြည့်စုံသောဇာတ်ကြောင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော်၎င်း၏အများအပြားပြောင်ပြောင်တင်းတင်းသည်မျက်စိဖြင့်အလွယ်တကူမမြင်နိုင်သောဆက်နွယ်သည့်တစ်ရှူးများမရှိဟုမဆိုလိုပါ။ ၁၄၉၈ ၏ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲကာဤခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုကာရစ်ဘီယံဟုခေါ်သည်မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်ယခုနှင့်ယခုအချိန်တွင်အချို့သောဒြပ်စင်များကိုမျှဝေသည်။ ဒီချိတ်ဆက်မှုတစ်ရှူးတွေထဲကတစ်ခုကငါကိုလိုနီခေတ်လူ့ကျင့် ၀ တ်၊
အရေးကြီးသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ခုလုံးကိုပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်ကူညီရာ၌ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုငါငြင်းခုန်ခဲ့သည်။ ပconflictိပက္ခနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နေသည့် Dynamic system သဘောတရားပညာရှင်များသည်ရှုပ်ထွေးမှု၊ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်မှီခိုမှုများကိုဖြစ်ရပ်များအတွင်းနှင့်ပြသရာတွင်ပြသရန်အတွက်ပုံရိပ်မြေပုံကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အရေးပါသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်စာရေးကိရိယာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပျော့ပြောင်း။ တက်ကြွပြီးမတူကွဲပြားမှုရှိရမည်။ သို့သော်အားလုံးနီးပါးက၎င်းသည်အတုအယောင်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်ရမည် နှင့် မျိုးရိုး။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားခုခံတွန်းလှန်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဗဟုသုတများပေးရမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရပ်တည်နေသည့်မြေပြင်နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး၊ ကမ္ဘာမြေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကိုအခြေခံကျကျပြန်လည်စဉ်းစားနိုင်ရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးရမည်။
အရေးပါသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်ကမ္ဘာကြီးကိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစွန်အဖျားများခွဲခြားထားသည့်နယ်ချဲ့ဝါဒ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောရှုထောင့်ကိုတွေ့မြင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များအားစည်းလုံးညီညွတ်စွာချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုထားသည် (ဥပမာ - ဖာဂူဆန်နိုင်ငံသားများနှင့်အတူရပ်တည်နေသည့်ဂါဇန်များနှင့်အပြန်အလှန်)၊ သူတို့သည်တစ်ခုလုံးကိုပိုမိုမြင်တွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းအား biopolitically ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောဤကိုလိုနီကျင့်ဝတ်သည်အာဏာ၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပေါ်ဗီတိုအာဏာသုံးခွင့်ရှိသောနိုင်ငံငါးနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလက်နက်များထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူတို့တွင်ပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ စစ်တပ်မဟုတ်သောအင်အားစုများ (ဥပမာရဲ) သည်စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့လာသည် (Ferguson, USA တွင်ကြည့်ပါ) ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စစ်တပ်စက်မှုဇုန်သည်စျေးကွက်များချဲ့ထွင်ရန်အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်ရှုနေသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ၀ င်ငွေမညီမျှမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဤမျှလောက်များစွာသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုသည်အဝလွန်ခြင်းကြောင့်လူသန်းတစ်ထောင်ကျော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ စီးပွားရေးပျက်စီးမှုများအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းများကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်တုံ့ပြန်မှုများ၊ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် myopic ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မစစ်ဆေးရသေးသောစားသုံးသူ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင်ပိုမိုသောနေရာများပိုမိုထည့်သွင်းရန်နှင့်သူတို့၏ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကိုအောက်ခြေလိုင်းသို့ထည့်သွင်းရန်တို့ပါဝင်သည်။ ဤအရာအားလုံးနှင့်အခြားအရာများသည်ဤကိုလိုနီကျင့်ဝတ်အရတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းစဉ်မှာကိုးကန့်ဖျက်သိမ်းခြင်းသည်မပြီးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်အရေးပါသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးလိုအပ်သည်။ အခု!
Trinidad ရှိ Dr. Wiliams ၏သုတေသနနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် Williams၊ HMA (2014) ကိုကြည့်ပါ။ ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု - ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတွင်ကျောင်းအကြမ်းဖက်မှုလေ့လာခြင်း။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုဂျာနယ်၊ ၁၈ (၂), 39-64
Critical Peace Education နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဖတ်ရှုရန်အတွက် Bajaj, M. , & Brantmeier, EJ (2011) တွင်ကြည့်ပါ။ နိုင်ငံရေး, Praxis နှင့်ဝေဖန်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဂျာနယ်၊ ၈ (၃)၊221-224 ။
ပsystemsိပက္ခ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလေ့လာရန် dynamical systems သီအိုရီကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဖတ်ရှုရန်။
ဘန်း, D. (2007) ။ စနစ်တကျလှုပ်ရှားမှုသုတေသန: စနစ်တပြင်လုံးကိုပြောင်းလဲများအတွက်မဟာဗျူဟာ။ ယူကေ: ပေါ်လစီစာနယ်ဇင်း။
Coleman, PT (2011) ။ ငါးရာခိုင်နှုန်း - မဖြစ်နိုင်ပုံရသောပflိပက္ခများကိုဖြေရှင်းခြင်း။ နယူးယောက်: ပြည်သူ့ရေးရာ။
Ricigliano, R. (2012) ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုအတွက်ကိရိယာတစ်ခု။ ကျောက်သား: Paradigm ထုတ်ဝေသူများ။
Dynamical Systems Theory တီထွင်ဆန်းသစ်သော Lab ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်
လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်သက်ဆိုင်သောအဓိကရှုပ်ထွေးသိပ္ပံတွေ့ရှိချက်များ၏အကျဉ်းချုပ် (ပflိပက္ခ၊ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့၏စုစည်းထားသည့်အတိုင်း (ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၊ ကမ္ဘာအင်စတီကျုတွင်အခြေခံထားသည့် AC4))
အာဘော်အကြောင်းHakim Mohandas Amani Williams သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Pennsylvania ပြည်နယ်၊ Gettysburg ကောလိပ်ရှိ Africana လေ့လာရေးနှင့်ပညာရေးလက်ထောက်ပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းလေ့လာခြင်းနှင့်ပြည်သူ့ပေါ်လစီအစီအစဉ်များတွင်ဒြေတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ စိန့်ဖရန်စစ်ကောလိပ်မှစိတ်ပညာဘွဲ့ (BA) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၊ နှင့် Ed.D. ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်ဒphilosophနိကဗေဒတွင်ပါ ၀ င်သောနှိုင်းယှဉ်ပညာရေးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်ရှိဆရာများကောလိပ်မှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှ။ သူသည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးအသင်း၏ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအထူးအကျိုးစီးပွားအုပ်စု (CIES) ၏တွဲဖက်ဥက္ကchair္ဌနှင့်ကျောင်း၏အကြမ်းဖက်မှု၊ ပညာရေးမညီမျှမှု၊ လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုအတွက်ပညာရေး၊ လူငယ်များစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ နှင့်ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလသီအိုရီ။
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကိုအောက်မေ့ခြင်း - နားမလည်သောသင်ခန်းစာများကိုအမှတ်ရခြင်း
ဇူလိုင်လ 1, 2019 သုတေသန 0
ဗြိတိသျှကောင်စီ၏လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Alison Baily သည်ပconflictိပက္ခနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်ပညာရေး၏အခန်းကဏ္oringကိုရှာဖွေလေ့လာသည့်သုတေသနအသစ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ကျောင်းသားစာတမ်းများအတွက်ခေါ်ဆိုပါ။ လူမှုတရားမျှတမှုအတွက် 12 နှစ်မြောက် Morton Deutsch ဆုများ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2016 လှုပ်ရှားမှုသတိပေးချက်များ 0
ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၊ ဆရာများကောလိပ်ရှိ Morton Deutsch ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပResိပက္ခဖြေရှင်းရေးဗဟိုဌာန (MD-ICCCR) သည်လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာထူးချွန်သောဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားအတွက် ၁၂ ကြိမ်မြောက် Morton Deutsch ဆုကိုစပွန်ဆာပေးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Morton Deutsch သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပconflictိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းနှင့်လူမှုတရားမျှတမှုနယ်ပယ်များတွင်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်သိသိသာသာပါဝင်ခဲ့သည်။ Morton Deutsch Awards သည်လူမှုရေးတရားမျှတမှုနယ်ပယ်တွင်ဆန်းသစ်သောပညာသင်ဆုနှင့်လေ့ကျင့်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စာတမ်းများဖေဖော်ဝါရီလ 12 ကြောင့်ဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ကိုလိုနီနယ်နိမိတ်များအားငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်အဟန့်အတားများ - ထရီနီဒက်ရှိကျောင်းအကြမ်းဖက်မှု
မတ်လ 21, 2016 သုတေသန 1
ထရီနီဒက်မှသုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ Hakim Mohandas Amani Williams က 'ကျောင်း၏အကြမ်းဖက်မှုသည်' လူငယ်များ 'အကြမ်းဖက်မှုသို့လျှော့ချပြီးကျောင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုယ်နှိုက်နှင့်ယင်း၏မောင်းနှင်သူများ /' အကြောင်းတရားများ '၏အဓိကကျသောဟောပြောချက်သည်အကန့်အသတ်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသည် သဘာဝ။ ရလဒ်အနေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဟောပြောချက်မှထွက်ပေါ်လာသောအဓိကကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများသည်ကျဉ်းမြောင်းစွာဖြစ်သဖြင့်ကျောင်းများရှိလူငယ်များအကြမ်းဖက်မှုတွင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အကြမ်းဖက်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိပါ။ ဝီလျံသည်ထရီနီဒက်ကျောင်းများ၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကိုပိတ်ဆို့ထားသည့်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုအဖြစ်ဤအငြင်းပွားဖွယ်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
၁ ပုဒ် / Pingback
Buss Head မှ Buss Lime သို့: မီဒီယာကိုယ်စားပြုမှုကို Covid-19 ပြစ်မှုဆိုင်ရာနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း - Zee Speaks